Eegumsa Daa’immanii - UNHCR Egypt
Baga nagaan dhufte
UNHCR waliin galmeessuun
Hayyama Jireenyaa Gibxii
Jeequmsa koorniyaa irratti hundaa’e (GBV)
Murteessuu Haala Baqattootaa (RSD)
Ragaa Dhalootaa Daa’imman Reefu Dhalataniif
Dhaabbilee Michuu UNHCR’n ta’an
Caritas Gibxii / Caritas Egypt
Tajaajila Baqattoota Qulqulluu Indiriyaas / St. Andrew’s Refugee Services (StARS)
Doktoroota Daangaa Hin Qabne / Médecins Sans Frontières (MSF)
Abbootii Seeraa Tokkummaa / United Lawyers
Ijoollee Baraaraa / Save The Children
Biyya Namaa Gibxii / Terre des Hommes (TdH) Egypt
Dhaabbata Tajaajila saayikoo-hawaasummaa fi Leenjii Kaayiroo / (PSTIC)
Kunuunsa / Care
Faawundeeshinii Mirga Baqattootaa Masrii / Egyptian Foundation for Refugee Rights (EFRR)
Tajaajila Gargaarsa Kaatolikii/Catholic Relief Services (CRS)
Kooluu Gibxii / Refuge Egypt
Dhaabbata Godaansaa Idil-addunyaa / International Organization for Migration (IOM)
Faayidaa qunnamtii saalaa fi miidhaa dabalatee hanna, malaammaltummaa fi gocha badaa gabaasuu
Ani daa’ima nama waliin hin deemne ykn daa’ima adda ba’ee yaaddoo eegumsaa qabudha/ Ani daa’ima miidhaa, tuffii, jeequmsa ykn faayidaarra ga’udha, eenyuun qunnamuu qaba?
Karaa imeelii hojiirra jiruun kallattiin kutaa Eegumsa Daa’immanii qunnamuu dandeessu ([email protected])
Yeroo hojiitti lakkoofsa kanaan sarara bilbilaa UNHCR qunnamaa (Wiixata hanga Roobii 08:15– 15:00 fi Kamisa 08:15– 12:00): 0227390400
Ani daa'ima nama waliin hin deemne ykn addaan ba'eedha. Tajaajilli akkamiitu na gargaaruu danda’a?
UNHCR dhaabbilee hedduu waliin ta’uun daa’imman nama waliin hin deemnee fi adda ba’aniif deeggarsa fi tajaajila kennuudhaaf hojjeta. Kunis gargaarsa hojjetaa dhimmaa dhuunfaa irraa fayyaa, barnoota, mana jireenyaa, fi fedhii biroo keetiin si deeggaru dabalata. Bal’ina isaa hunda barruulee kana keessaa argachuu dandeessu: Arabic | English | Tigrinya
Daa’imman ulaagaa guutan kanneen nama waliin hin deemnee fi addaan ba’an gargaarsa maallaqaa isaanii akkamitti argachuu danda’u?
UASC ulaagaa guutan umuriin isaanii waggaa 16 fi 17 gargaarsa maallaqaa isaanii ji’a ji’aan karaa Waajjira Poostaa ni argatu. Ergaan gabaabaa tokkoon tokkoon daa’imaaf dhuunfaan, yeroo walitti qabuu waliin ni ergama. Ijoolleen FA isaanii Kaardii UNHCR isaanii isa jalqabaa fayyadamuun walitti qabu. Sa’aatiin hojii Waajjira Poostaa ganama sa’aatii 8:00 – galgala sa’aatii 3:00, Wiixata hanga Kamisaatti. Ijoolleen naannoo isaaniitti Waajjira Poostaa kamiyyuutti dhiyaachuu ni danda’u.
UASC ulaagaa guutan umuriin isaanii 15 fi isaa gadi ta’e maallaqa callaa kaawuntarii irraa Caritas keessatti argachuu itti fufa, akkasumas ergaa gabaabaa guyyaa beellama isaanii isaan beeksisu ni argatu.
Gargaarsa walitti qabuu irratti qormaanni yoo si mudate, hojjetaa dhimma kee qunnami ykn [email protected]